नियमित खानामा टिमुर प्रयोग गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा थाहापाउनुहोस् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२५ असार २०७८, शुक्रबार ००:००
टिमुर प्राय सबैको भान्सामा पाउन सकिन्छ । टिमुरलाई औषधिय गुणले भरिपूर्ण मानिने एक तरकारीमा प्रयोग हुने मसला हो । जाडो मौसममा टिमुरको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: Jul 9, 2021
अनुहारको चाउरीपन कम गर्नेदेखि डण्डीफोर हटाउने आँपको बोक्राको जान्नुहोस् थप फाइदा !
आँप भन्ने वित्तिकै हामी धेरैको मुख रसाउने गर्छ । सायद आँप मन नपर्ने मानिसहरु कमै
कोरोनाले जोडीको यौनजीवनमा झगडा कम, सम्भोग बढी : अनुसन्धान
कोरोना महामारीको सुरुवाती समयमा थुप्रै विशेषज्ञलाई लागिरहेको थियो कि कोभिड-१९ को तनावका कारण मानिसहरुको रोमान्टिक
अष्टांग आयुर्वेद किन महत्वपूर्ण छ ?
पछिल्लो समयमा विश्वमा आयुर्वेद प्राचिनतम चिकित्सा प्रणाली हो । अहिलेको विश्वमा जतिपनि चिकित्सा प्रणालीको विकास
विवाहपछिको राम्रो सम्बन्ध बनाउन प्रेमी-प्रेमीकाले बुझ्नै पर्ने यी बानीहरु !
हाम्रो समाजमा बुढापाकाले भन्ने गर्छन् मागी विवाहको तुलनामा प्रेम विवाह कमजोर हुने गर्छ । अहिलेको